Danjire Afey oo loo magacaabay Ergeyga Qaxootiga Soomaaliya – Qaranimo Online
You are here: Home 2016 October 1 Danjire Afey oo loo magacaabay Ergeyga Qaxootiga Soomaaliya
Danjire Afey oo loo magacaabay Ergeyga Qaxootiga Soomaaliya
Posted on October 1, 2016 by Ali Omar Ghedi | 0 Comments
Muqdisho, October 1, 2016: Markii u horeysay ayaa Qaramada Midoobey ergey gaar ah u magacawday Arrimaha Qaxootiga Soomaaliya, si loo hubiyo ammaanka qaxootiga, xilli kooxaha xuquuqda aadanaha ay ku eedeeyeen dowladda Kenya inay dooneyso in si qasab ah ku xirto xerada qaxootiga ugu weyn Caalamka ee lagu magacaabo Dadaab.
Danjire Maxamed Cabdi Afey, oo hada haya xilka Wakiilka Urur Goboleedka IGAD, ayaa loo magacaabay Wakiilka Gaarka ah ee Qaramada Midoobey u qaabilsan Qaxootiga Soomaaliya, isagoo ka shaqeyn doono dadaalka dib u celinta qaxootiga iyo xal u helida magangalyada dadka qaxootiga heer qaran iyo heer gobolba ayada oo Qaramada Midoobey kor kala socon-doonto.
Mudane Afey ayaa sidoo kale ka shaqeyn doona sidii dadka dib loogu celinayo Soomaaliya loogu abuuri lahaa mashaariic horumarineed oo ay maareeyaan danahooda.
Dad gaarayaa 31 kun oo qaxooti ayaa si iskood ah dib ugu laabtay Soomaaliya tan iyo sanadkii 2014, waxaase jira walaac laga qabo qorshaha Kenya ku dooneyso inay dadkaas si qasab ah ku celiso oo hay’adaha Xuquul-insaanka ay indha gaar ah ku hayaan.
Kenya ayaa bishii May ee sanadkan ku dhawaaqday inay xiri doonto xerada Dadaab, kadib markii ay sheegeen in weerarada argagixiso ee gudaha dalkeeda ka dhaca, laga soo ababaulo xeradaas, in kastoo dowladda Kenya aysan u haynin cadaymo mujinaayo warka ka soo baxay.
Shirki ka Socday Muqdishu oo Guul-darro ku Dhamaaday January 27, 2016
Kenya oo sheegtay in ay qabatay qaraxyo iyo raggii watay June 12, 2017
RW Ku-Xigeenka dalka oo la shiray hey’adaha UN-ka November 10, 2016
Tirada dadkii ku dhintay gantaalka yemen oo sare u kacday iyo Sawiro March 17, 2017
Diyaar-growga caleema saarka Madaxda Hirshabeelle oo ka socota Jowhar October 22, 2016